Ngwa ngwa YouTube: Olee ịkụda YouTube Videos
M hụrụ ọtụtụ ọrụ jụrụ olee otú i akwụsịlata a YouTube video on Yahoo Azịza. Ọmụmaatụ:
Olee otú ị akwụsịlata YouTube videos?
Enwere ụzọ ịkụda ọsọ nke videos mgbe egwuri na YouTube & yiri sites?
Akwụsịlata YouTube videos? Dance omume mberede?
N'ihi ya, bụ ụzọ ọ bụla ịkụda a YouTube video? Ọfọn, e nwere ụzọ dị iche iche akwụsịlata ebre ọsọ n'oge playback. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ isi na-akwụsịlata YouTube video na-adịgide adịgide ọzọ na nzube, here're ụzọ abụọ: eji YouTube si Video Editor ma ọ bụ Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor).
Part 1: Tinye ngwa Motion na YouTube Video Editor
Part 2: Tinye ngwa Motion na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Ọ bụrụ na ị na mgbe e were site ọsọ nke njirimara gị-eme vidiyo na YouTube, nwalee ya video nchịkọta akụkọ. Dị ka YouTube ka kwukwara ọhụrụ "ngwa ngwa ngagharị" ngwá ọrụ iji ya YouTube Editor, ọ na-eme mara mma nke ukwuu kpọmkwem ihe ọ na-ada ka. Ebe a bụ ihe dị mfe ndu na-esi tinye ngwa ngwa ngagharị na ya.
Nzọụkwụ 1: Ịnweta YouTube Video Editor. Ị nwere ike ma na-aga ozugbo na URL, nke bụ http://www.youtube.com/editor, ma ọ bụ pịa "Bulite"> "Dezie" ka Video Editor taabụ.
Nzọụkwụ 2: Dọrọ gị video na usoro iheomume na abụọ pịa ya. Na mmapụta elu window, ị ga-ahụ "ngwa ngwa Motion" nhọrọ. Kwado ya wee họrọ urè na ị chọrọ video ịbụ. A na-emetụta mmetụta dum video na ị na-ahọrọ.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ akwụsịlata akụkụ nke video, laghachi isi edezi taabụ, clip ya site na mbụ video na iji slicing ngwá ọrụ na ịgbakwunye ngwa ngwa-ngagharị mmetụta na clip naanị. Ị nwere ike mgbe ndokwa dị iche iche mkpachị i nwere na ndị nchịkọta akụkọ ike gị ikpeazụ video.
Nzọụkwụ 3: Tinye akà rà nhọrọ "Preview mmetụta n'akụkụ-na-n'akụkụ" na mbụ video na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ otú ndị mbụ video ejije tụnyere onye ị na-na na slowed ala. Ọ bụrụ na ị obi ụtọ na N'ihi ya, kụrụ "Emela" zọpụta ntọala.
Nkebi nke 2: Tinye ngwa Motion na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) bụ ihe dị mfe na-eji ma dị ike video edezi ngwá ọrụ iji nke ka beginners dezie ha videos na nkeji. Ọ na-agụnye ọ bụla kpochapụwo video edezi ọrụ gụnyere ịgbanwe playback ọsọ, ewepụtụ, akuku, bugharia, kewaa nakwa dị ka ọtụtụ pụrụ iche edezi atụmatụ dị ka-awụlikwa elu Cut, Mozis ghara ịma na Tilt Mgbanwe. Ugbu a, ka anyị hụ otú ịgbakwunye ngwa ngwa ngagharị na nke a video edezi software.
Nzọụkwụ 1. Download YouTube na Free YouTube Downloader
Nke mbụ niile, unu mara na nke a abụghị a usoro ịkụda online YouTube video. Ị nwere ibudata YouTube vidiyo na draịvụ ike gị mbụ. Ọtụtụ free ngwa ime ọrụ. Ka ihe atụ, Wondershare Free YouTube Downloader na Video DownloadHelper (Firefox Tinye-na).
Nzọụkwụ 2. Tinye video faịlụ ka usoro ihe omume
Download na wụnye Video Editor na ọ kpam kpam akwado ebudatara YouTube videos (na-emekarị na FLV). Ị nwere ike ma pịa "Import" na isi windows na họrọ YouTube FLV video faịlụ na kọmputa gị, ma ọ bụ nanị ịdọrọ na dobe YouTube FLV faịlụ ka onye ọrụ Album. Ọzọ, ịdọrọ YouTube video site na onye ọrụ si Album ka usoro iheomume nke edezi.
Nzọụkwụ 3. One Pịa tinye ngwa ngwa ngagharị
Na usoro iheomume, abụọ click na kwukwara YouTube video na-emeghe na video edezi panel. Ị ga-ahụ Speed ​​nhọrọ, na ndị na-agba ọnụ ọgụgụ na-egosi ngwa ngwa ma ọ ngwa ngwa ngagharị. Bugharịa ihe obere triangle bọtịnụ 0,5 na ị na-a akwụsịlata version nke YouTube video. Pịa Play bọtịnụ na preview windows nwere anya na ọhụrụ YouTube video.
Nzọụkwụ 4. Export YouTube video nke ngwa ngwa ngagharị
Ị pụrụ ịnọgide na-edezi YouTube videos. Mgbe niile mere, pịa "Mepụta" zọpụta n'ihi. I nwere ike ịzọpụta YouTube video ọ bụla na-ewu ewu formats na kọmputa site na ịpị "Format". Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu YouTube video on iPod, iPhone, iPad, pịa "Ngwaọrụ" ma họrọ ngwaọrụ gị. I nwekwara ike ịkekọrịta YouTube video ruo YouTube ozugbo ma ọ bụ ọkụ YouTube video ka DVD.
Video Tutorial: Tinye ngwa Motion na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Olee otú Jikọọ AVI Video Files na VirtualDub
> Resource> Video> Olee otú iji Tinye ngwa Motion ka YouTube Videos